Wareegga indhaha labka - tilmaamaha ugu fiican ee daryeelka shakhsi ahaaneed | Ragga Stylish
Alicia tomero | | Is-qurxinta, Daryeelka shaqsiyeed
Qarsoodiga indhaha ee ragga ayaa loo sameeyay raggaas xilligeenna. Hadda waa markii ay si fiican u daryeelayaan sawirkooda, waana taas waxay jecel yihiin inay daryeelaan naftooda waxayna ogyihiin in natiijooyinka ay cadahay. Haddii aad jeceshahay inaad daryeesho muuqaalkaaga waxaad ogaan doontaa inay adag tahay in la tirtiro saameynta dheer ee usbuuc daallan ama in aaggan horayba looga soo gudbay burburka wax u muuqda sida tallaabooyinka sannadaha.
Ma dayici kartid aagga indhaha ku hareeraysan, maxaa yeelay aaggan waxaa lagu gartaa da'da qofka. Wareegyada indhaha ee ragga waa kareemo loogu talagalay daryeelkooda, taasina waxay u horseeddaa in lagu daro nolol maalmeed iyo shaqsiyeed. Dalbashada sheyga si sax ah waxay muhiim u tahay horumarka wanaagsan, Marka laga reebo xulashada indho-indheynta wanaagsan ee tilmaamaysa awoodda ay u leeyihiin inay si wanaagsan u gutaan shaqadooda.
1 Sida loo isticmaalo dusha indhaha ee ragga
2 Talaabooyinka loogu talagalay codsi wanaagsan:
3 Waxyaabaha ay ka kooban tahay waa inay ku jirtaa indha sarcaad wanaagsan
4 Meelaha indhaha ee ugu fiican ragga
4.1 Clinique Eye dusha
4.2 Nezeni, oo leh qaab cusub
4.3 Wadarta Soo nooleynta Eve ee Shiseido
4.4 Wareegga indhaha ee Oskia
4.5 R'oreore Ragga Khabiirka ah Hydra Energetic- Isu rog
Sida loo isticmaalo dusha indhaha ee ragga
Wareegga indhaha waa lakabka khafiifka ah ee maqaarka oo daboolaya aagga hareeraha indhaha.. Waa aag jilicsan sidaa darteedna waxay u badan tahay inay ku dhacdo calaamado muuqda sida goolal madoow ama boorsooyin, dhammaantood waxay ka dhashaan daal ama arrimo kala duwan sida da ', sigaar cabid, cabid, cunto xumo, iwm. Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho kareemkan laga bilaabo da'da 30 sano, taas oo ah goorta ay astaamahani bilaabaan inay soo baxaan.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in codsashada dusha isha uusan ahayn sida kareemka caadiga ah, inaad u sameyso sida saxda ah waxay kugu dhiiri gelin doontaa inaad sii wado daryeelka naftaada maxaa yeelay waxaad arki doontaa sida natiijooyinkooda wanaagsan uga jawaabaan.
Talaabooyinka loogu talagalay codsi wanaagsan:
Sida ugu habboon, u codso subaxdii iyo habeenkii, laakiin ugu yaraan hal mar maalintii.
Codso qayb yar oo badeecada ah midig xagga hoose ee indhahaaga, inkasta oo aad sidoo kale ku dari karto kareemka sunniyaha hoostiisa.
Waa inaadan ka saarin dusha sida marka aad kareemkaan mareyso laakiin fartaada ku garaac.
Isticmaal fartaada farta si aad u siiso taabashadaas iskuna day inaad faafiso badeecada ilaa aagga godka ilmada, waa inaad tan sameysaa ilaa kareemka gebi ahaanba la nuugo.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay waa inay ku jirtaa indha sarcaad wanaagsan
Retinol waa fiitamiin A, Waxay muhiim u tahay aaggan maadaama ay gacan ka geysaneyso dib-u-habeynta aaggaas iyo ka caawinta yareynta khadadka ganaaxa.
Acid Hyaluronic: Waa qayb dabiici ah oo ka caawisa buuqa unugyada maqaarka isla markaana yareeya duuduubka.
Peptides: iyaga ayaa mas'uul ka ah dhismaha collagen. Waxaad ogaan doontaa in maqaarkaagu lumiyo dabacsanaantiisa, inay ku hoos dhacdo culeyskiisa iyo duuduubku oo sameysmo, sannadihii la soo dhaafay. Peptides-kaani waxay kaacaawinayaan soosaarka iyo dib udhiska kolajka sidaa awgeedna la dagaalamaan gabowga.
Kahortaga falaadhaha qorraxda: Waa inaad doorataa kareem u shaqeeya sida kareemka qorraxda, maaddaama qayb ahaan lagu eedeynayo gabowga jirkeenna haddii aan sii bandhigno. Waxa lagu taliyay waa SPF 50 oo xiri kara ilaa 99% falaaraha UVB.
Meelaha indhaha ee ugu fiican ragga
Clinique Eye dusha
Kareemkan wuxuu caawiyaa hagaajinta xariiqyada wanaagsan iyo laalaabyada, waxay ku abuureysaa adkeyn aagga waxayna siineysaa dabacsanaan. Thanks to iskudhafka peptides, soosaarida bj birrk cad iyo borotiinka whey, waxay kaa caawin doontaa la dagaalanka astaamaha gabowga iyadoo la abuurayo iftiin.
Nezeni, oo leh qaab cusub
Kareemkan ayaa la dhacsan natiijooyinkiisa waana sababtaas tan ay isku dhigeyso kaalinta koowaad ee liistada. Waxay kakoobantahay Cobiolift waxayna kusiineysaa dammaanad qaadka baabi'inta ilaa 47% ee laalaabkii. Waxay bixisaa a jilicsanaan weyn, adkeysa oo adkeysa aagga.
Wadarta Soo nooleynta Eve ee Shiseido
Wareegtani waxay u shaqeysaa si aad u wanaagsan oo baahi weyn loo qabaa. Waxaa lagu dhiirrigeliyaa daaweynta hyaluronic acid sidaa darteed hoos u dhig calaamadaha daalka, qallalka iyo la dagaallanka calaamadaha gabowga. Waxay kaloo kaa caawineysaa yareynta muuqaalka wareegyada mugdiga ah waxayna kaa caawineysaa in aad si fiican u waraabisid aagga.
Wareegga indhaha ee Oskia
Alaabtaani waxay siisaa natiijooyin aad u wanaagsan waana mahadsanid nafaqadeeda hodanka ku ah peptides, antioxidants iyo nafaqooyin tayo sare leh. Noolaha dhirta ayaa iftiiminaya aagga wareegyada mugdiga waxayna jilciyaan khadadkaas wanaagsan ee muujinta, waxay yareeyaan isku-buuqa indhaha waxayna difaacaan DNA-da.
R'oreore Ragga Khabiirka ah Hydra Energetic- Isu rog
Badeecadani waxay ku jirtaa Roll qaab ahaan waana wax badan oo la taaban karo oo lagu codsado nidaamkaan cusub. Waxay ku leeyihiin qiimeyn aad u wanaagsan suuqa waana taas dhakhso u cusbooneysiiyaa una kiciyaa maqaarka. Waxay yareyneysaa boorsooyinka iyo wareegyada madow ee dammaanadda leh, sidoo kale waxay la dagaallameysaa calaamadaha daalka.
Haddii dhibaatadaadu badanaa tahay wareegyada mugdiga ah ee maqaalkan waxaan kuu sheegi karnaa kuwa ugu fiican daaweynta dabiiciga ah si loola dagaallamo iyo alaabada ka soo horjeedka mugdiga ah ee aad ka heli karto suuqa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Dusha indhaha indhaha
Dabayl fidsan oo ragga ah